दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनेका ओली र विद्यादेवी किन खोज्दैनन् मदन भण्डारीको हत्यारा ? – Todays Nepal
आज नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण हुँदै छ । लामो समयदेखि एकीकरण प्रक्रियामा रहे पनि भागबण्डामा कुरो मिलेको थिएन । बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डबीच वान-टु-वान भएको वर्ताले एकतामा सहमति जुटाएको हो ।
आज जेठ ३ गते अर्थात् मदन भण्डारीको २५ औँ स्मृति दिवस पनि हाे । यही अवसरमा आज एमाले-माओवादीबीच एकता हुँदै छ । यसरी भण्डरीकै स्मृति दिवसमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भइरहँदा मदन भण्डारीलाई नसम्झने को होला र ? अहिलेकी राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति उनै मदनकी जीवनसंगीनी र राजनीतिक सहयात्री विद्यादेवी भण्डारी छिन् । विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएकी हुन् । उनी २०७२ कार्तिक ११ गते पहिलोपटक राष्ट्रति बनेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री पनि अहिले एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । ओली पनि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा अासिन छन् ।गत मङ्सिर १० र २१को चुनावपछि दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै एमालेकै हुन् र, दुवै दाेस्राे कार्यकाल पदबहालीमा रहेका छन् । ओली यसअघि ०७२ साल असोजमा पहिलोपल्ट माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
यतिखेर मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिकाे हैसियतमा उनै मदनका राजनीतिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली छन्। मदनकै जीवनसंगीनी विद्यादेवी र उनकै राजनीतिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली सत्ताकाे केन्द्रमा हुँदा पनि मदन भण्डारीको हत्यारालाई किन खोज्दैनन् ? याे प्रश्न फेरि एकपटक जीवन्त भएर उठेको छ ।
ओलीले कुनै बेला भनेका थिए- ‘म सरकारमा गएँ भने भण्डारीका हत्यारा अवश्य पत्ता लगाउँछु ।’
तर आज ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा छन्, यति मात्रै हाेइन उन मुलुककै हालसम्मकै ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर किन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने दिशामा उनी केही गर्दैनन् ? ओली मात्र होइन, भण्डारीकै जीवनसङ्गीनी विद्यादेवीले पनि राष्ट्रपतिजस्ताे उच्च अाेहाेदामा छिन् । चाहे भने यी दुवैले अनुसन्धान गराएेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्छन् । तर, किन खोजी गर्दैनन् मदन भण्डारीको हत्यारा ? के एमाले र विद्यादेवीले मदन भण्डारीलाई भुलेकै हुन त ? अाम जनताकाे मनमा याे प्रश्न बल्झिरहनेछ ।
किन की मदनको हत्याले सबै भन्दा बढी असर राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई परेको थियो। तर पनि व्यवहारमा हत्याराको खोजी किन हुन सकेन ? यो जनताले बारम्बार उठाई राख्ने प्रश्न हो ।
मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक अदभुत जननेता हुन्। जनताले उनकाे गुनगान गाउन अझै छाडेका छैनन् । नेपालको यो स्थिति देख्दा बुढापाखाले नि भन्ने गरेका छन्- ‘मदन भण्डारी भए यो देश अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो । यी अहिलेका नेताहरू एक-अर्कालाई आरोप लगाउँदैमा समय बर्बाद पार्छन् । चुनावको बेला देशलाई भोलि नै पूरै परिवर्तन गराउने जस्तै गरेर भोट माग्छन् र जितिसकेपछि गाउँमा त मुख पनि देखाउँदैनन् ।’ गाँउतिर गएको बेला यस्तो असन्तुष्टिहरु धेरै पोखेको भेटाउछाैं ।
लोकप्रिय र अदभुत क्षमताका ‘जननेता’ भण्डारीकाे हत्या अझै रहस्यमय नै छ । उनकाे हत्या भएको आज २५ वर्ष पूरा भइसक्यो। तर पनि अझै हत्यारा भने पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । उनको वि.सं. २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा भएकाे थियाे । उनी चढेकाे जिप त्रिशूलीमा खसेकाे थियाे, जहाँ उनी बाँचेनन् तर उनका ड्राइभर बाँच्न सफल भए । त्यो दुर्घटनालाई सबैले ‘दुर्घटना’ होइन, रहस्यमय वा नियाेजित ‘हत्या’ भन्दै अाएका छन् । तर कसले र किन गर्‍यो उनकाे हत्या ? याे चाहिँ आजसम्म रहस्यमय नै रहेको छ ।
दासढुंगा दुर्घटनामा मदनसँगै एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा जिपका चालक अमर लामा मात्र बाँचेका थिए। उनको पनि २०६० सालमा रहस्यमय हत्या भयो। ड्राइभरकाे समेत हत्या भएपछि याे काण्ड झन् रहस्यमय बन्दै गएकाे छ । ती तीनैजनाको हत्याको रहस्य अझै सम्म पनि पत्ता लागेको छैन।
०४६ को आन्दोलनपछि वामपन्थी आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कार्यमा मदन भण्डारीले महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको छ। कतिले बेला-बेलामा भन्ने गरेका छन् -‘मदनकै सिद्धान्तले मार्गनिर्देश गरेको बाटोबाट अहिले देश अघि बढिरहेको छ ।’ समृद्ध नेपाल बनाउने उनको परिकल्पना भने र कहिले पूरा होला ? र कसले गर्ला ?
अहिले राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति र संविधानका संरक्षक उनै मदनकी जीवनसंगीनी विद्यादेवी छिन् र वाम गठबन्धनबाटै पाँच वर्षको लागि सरकार पनि बेनेको छ । पक्कै पनि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा भने मदन भण्डारीको हत्यारालाई पत्ता लाग्ला कि ? त्याे डरलाग्दाे घटना या भनाैं षड्यन्त्रकाे पर्दाफास हाेला कि ? अहिले मदनका प्यारा जनताकाे मनमा झिनो आशा बाँकी नै छ ।
आज मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा एमाले र माओवादी एकता भइरहँदा मदन भण्डारीको हत्यारालाई खोजी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उठ्छ कि उठ्दैन ? जनताकाे आशा सम्बाेधन हाेस् !